Madax ka tirsan suuriya oo sacuudiga u tagtay soo celinta xiri... | Universal Somali TV
Madax ka tirsan suuriya oo sacuudiga u tagtay soo celinta xiriirka diblumaasiyeed
Madaxa dhanka amaanka ee xukuumada Suuriya Cali Mamluuk ayaa la soo warinayaa in uu booqasho ku tagay wadanka sacuudiga,iyadoo ay dowlada suuriya bilihii la soo dhaafay ay ku howlaneyd soo celintii xiriirkii diblumaasiyadeed oo wadamada caalamka.
Xukuumada uu hogaamiyo madaxweyne Bashar Assad ayaa dagaalo xoogan kula jiray sideedii sano ee la soo dhaafay dagaalyahano ka tirsan mucaaradka suuriya.
Mamluuk ayaa waxaa uu ka mid yahay la taliyeyaasha gaarka ee madaxweyne Assad waxaana uu u tagay wadanka hodanka ku ah saliida ee sacuudiga sidii loo soo celin lahaa xiriirka diblumaasiyadeed oo ay lahaayeen labada dal.
Booqashadan ayaa saraakiil ka gaabsaday in magacooda la xuso waxay sheegeen in ay timid bishii la soo dhaafay maalmo uun kadib markii wadamada Imaaraadka iyo baxreyn ay ku dhawaaqeen in ay dib u furteen safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada Dimishiq.
Kan-xigaTurkiga oo ugu baaqay Ruushka iyo Iir...
Kan-horeBooliska magaalada London oo xabsiga ...
45,935,039 unique visits